KoPhyoCCIE: Multicast ရဲ့သဘော
ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ Routing ဆိုတာဟာ အဓိကအားဖြင့် Unicast Routing ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Unicast Routing ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုနားလည်သွားပြီ၊ uRPF တို့ BGP တို့ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ Multicast Routing ကိုလေ့လာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ အဲဒါတွေ မသိသေးရင်တော့ Multicast Routing နည်းပညာရဲ့ ရှုတ်ထွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် နားလည်နိုင်ဖို့မလွယ်လောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ကိုသာ ပြောတာပါ၊ တားမြစ်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
အရင်ဦးဆုံး Multicast ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို မြင်သာအောင် အရင်ကြည့်ကြတာပေါ့။ အခုခေတ်မှာ Facebook ကိုလူတိုင်းအသုံးပြုတတ်ကြမှပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Multicast ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ Facebook အသုံးပြုပုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အလွယ်တကူသိနိုင်ပါပြီ။ Facebook မှာ ကျွန်တော်တို့ ပို့စ်တွေတင်တဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုကြည့်စေချင်တင်လား၊ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလား၊ အခုလို Cisco Myanmar လို Closed Group ကိုလား၊ ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံး မြင်စေချင်အောင် မိမိ Wall မှာပဲ Public ဆိုပြီး တင်ချင်တာလားဆိုပြီး ရွေးရပါတယ်။ (မသိသေးရင် Facebook များများသုံးပါ) :)
တယောက်ကိုပဲကြည့်စေချင်တာက ဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင် Unicast ပေါ့၊ Source တစ်ခု Destination တစ်ခုပဲ။ Public ကိုတင်တာကြတော့ Broadcast ပေါ့၊ Source တစ်ခုကနေပြီးတော့ Facebook ဆိုတဲ့ Broadcast domain တစ်ခုအောက်က သူတွေအကုန်လုံးမြင်အောင်တင်တာပေါ့။ Broadcast မတူတဲ့ Google + တို့၊ Instagram တို့ဖက်ကသူတွေတော့ဘယ်ပါလိမ့်မလဲ။ Multicast ဆိုတာက Facebook အောက်မှရှိတဲ့ သီးခြား Group တွေကိုပဲသီးသန့်တင်တဲ့သဘောပေါ့။ အဲဒီအုပ်စုက မဟုတ်တဲ့သူတွေဆိုမမြင်ရဘူး၊ အုပ်စုအထဲကသူတွေပဲမြင်ရတာပါ၊ Source အနေနဲ့ကတော့ တစ်ခုပဲပေါ့။ Multicast ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးသိသင့်တာတော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Group Concept ပါပဲ။ နောက်တခုကတော့ အဲဒီပို့စ်တင်တဲ့အခါ အုပ်စုထဲကသူတွေ တစ်ယောက်စီအတွက် ပို့စ်တွေ အများကြီးရေးစရာ မလိုပါဘူး၊ တစ်ခုရေးပြီး တင်လိုက်ရင် အကုန်လုံးဖတ်လို့ရသွားပါပြီ။ ဒါဟာ Multicast ရဲ့နောက်ထပ် အဓိကလုပ်ဆောင်ပုံပါ။ တစ်ခုပဲလိုပါတယ်။
Facebook မှာလူတရာလောက်က ကိုယ်ကို Hi လာလုပ်ရင် တယောက်ချင်းစီကိုပြန်ပြီး Hi လုပ်ရင်တောင် အခါတရာပြန်လုပ်ရမှာဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ဒါတောင် Hi ပဲရှိသေးတယ်။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးသာ အခါတရာလောက်ပြောရရင် ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲ၊ ဖုံးဘေလ်တွေလဲ ပေးလိုက်ရမဲ့အဖြစ်။ Group/ Multicast နဲ့ဆိုရင်တော့ Hello everyone ဆိုပြီး တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့ ပွဲပြီးသွားမှာပေါ့။ ဒီလောက် အသေးအဖွဲလေးမှာတောင် အတော်ကွာခြားနေရင် သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ စသဖြင့် ကြီးမားတဲ့ Data တွေဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်ကွာခြားလိမ့်မလဲဆိုတာ တွက်စလို့ရပါတယ်။ အခုလောက် သိပြီဆိုရင်တော့ Multicast ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ သိသွားပါပြီ။ ထပ်လေ့လာရမှာကတော့ အဲဒီလို Multicast လုပ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုနည်းပညာ၊ ဘာ Protocol တွေကလုပ်ဆောင်ပေးတာလဲကိုပါ။
အဲဒါကိုလဲ အသေးစိတ်မလေ့လာခင်မှာ အပေါ်ယံ Overview ကိုအရင်ကြည့်ထားရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Multicast Group Concept နဲ့ အသုံးပြုတဲ့ Multicast Address တွေကဘာတွေလဲ၊ Intradomain မှာအသုံးပြုတဲ့ Protocols တွေက ဘယ်လိုခေါ်လဲ၊ အဲဒီကမှတဆင့် CCIE level တွေမှာ ပါတဲ့ Interdomain Multicast Protocols တွေက ဘယ်လိုဆိုတာကို အကြမ်းမျဉ်းအနေနဲ့ ရင်းနှီးသွားပြီဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းဖတ်ရတာ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်တဲ့အခါ အခုအောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်က Overview အတွက်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ နဲနဲတော့ဟောင်းနေပေမယ့် အသစ်ထွက်တဲ့ စာတမ်းတွေအတော်များများကလဲ ဒီကနေ ကူးယူထားတာကြောင့် ဒီလင့်ကိုဖတ်ရင် ရပါပြီ။
Posted by KoPhyoCCIE at 20:31
People call me Phyo or Ko Phyo! Network Professional, CCIE#38100 "Disclaimer: The view, ideas and the notes from my posts do not represent my current employer and any organization. Information presented here is for educational and knowledge sharing purposes."
Thank you for visiting my Blog!. Watermark theme. Powered by Blogger.